Umthandazo wokuthandaza | São Cipriano, Maria Padilha & Zé Pilintra [+ Strong]
kuqala » Imithandazo » Umthandazo wokuPhumla
Khangela okulungileyo umthandazo wokubongoza uthando lweSaint Cyprian okanye lweZe Pilintra?
Yazi ukuba nawuphi na kule mithandazo unamandla kakhulu kwaye uyayenza le nto uyithethayo.
Into esele isaziwa ngowona mthandazo unamandla wale njongo.
Ihlabathi le-intanethi ligcwele ulwazi kwaye inyaniso kukuba uninzi lwalo alusebenzi.
Yiyo loo nto ubenethamsanqa namhlanje, kuba sizokubonisa imithandazo esebenzayo.
Ukuba ufuna ukubophelela umntu phantsi ngendlela ongazange wazi ngayo ngaphambili, ikamva likuse kwindawo elungileyo.
Sineyona mithandazo inamandla, engazange ityhilwe ngaphambili eya kutshintsha ubomi bakho kube kanye.
Ngaba umthandazo obophelelayo onothando uyasebenza?
Abantu abaninzi bacinga ukuba ukubopha kunokwenziwa kuphela ngesiko elinzima.
Bubuxoki bokwenene obu.
Kunokwenzeka ukubophelela umntu phantsi ngokuthandaza nje, ingakumbi ukuba uthando olukhoyo ngalo mntu kuthethwa ngaye lolokwenene.
Ukuba umthanda ngokwenene umntu nangamandla akho ephela, yazi ukuba unokumbopha loo mntu ngokuthandaza nje.
Ayinamsebenzi nokuba uyayisebenzisa Umthandazo weSaint Cyprian wokomeleza kakhulu ou ukuya eZé Pilintra.
Eyona nto ibalulekileyo kukuba uyalithemba iqumrhu othandaza kulo kwaye umthanda ngokwenene loo mntu.
Ukuba uthando luyinyani kwaye iinjongo zakho zilungile unokuqiniseka ukuba imithandazo iya kusebenza.
Ukongeza, yonke imithandazo ebekwe apha iye yavavanywa ngaphambili.
Ngoko akukho nto yokoyika, banobungqina bokuba bayasebenza ngokwenene, qalisa nje ukuthandaza ngoku!
Umthandazo weSaint Cyprian wokufumana i-moring eqinisekileyo
Abantu abaninzi bayayazi iSão Cipriano, kodwa abanalo nofifi lwamandla ayo.
Le ngcwele inamandla iyakwazi ukubopha nabani na.
Akukhathaliseki nokuba ngubani na, into ebalulekileyo kukuba ube nokholo kuye.
Thandaza kuye ngaphandle koloyiko, unokuqiniseka ukuba lo ungcwele uya kusebenzisa onke amandla akhe ukukunceda.
Kholelwa kulo mthandazo uncamathelayo kule ngcwele inamandla.
I-Saint Cyprian, ongomnye wabangcwele abanamandla ekuthandazwa kubo ngakumbi imithandazo, wena okwaziyo ukuguqula iintloko, iintliziyo, iingcinga kunye nenkohliso, ndithandaza kuwe namhlanje ngokholo olukhulu ukuba ndikucele into ebonakala ingenakwenzeka. kodwa ndiya kuyenza ngamandla akho.
Ndithandaza ngamandla amakhulu ukuba ukwazi ukuguqula intloko kaZibani-bani, ukuba umenze aphambene ngam, enothando, zonke iingcinga zakhe zijike kum ibe ndim ndedwa.
Ndithandaza ngamandla amakhulu ukuba ubophe uZibani-bani, ewe, ngokwenene, ukuze wenze iqhina lothando liqine kangangokuba awukwazi ukuqhawula nawuphi na omnye uNgcwele kwaye ndiyazi ukuba oku kunokwenzeka kuba akukho mntu. womelele kunawe.
Ndithandaza kuwe umthandazo ovela eSaint Cyprian wokubetha kuba ndiyazi ukuba ngamandla akho uZibani-bani uyakuba ngowam, abe ngowam kuphela, hayi omnye umntu.
Ndiyazi ukuba unamandla kwaye ndiyazi ukuba uyabanceda abantu abathandanayo kwaye yiyo loo nto ndinokholo kuwe ngcwele wam othandekayo.
Bendifuna ukubulela ngexesha olichithileyo umamele umthandazo wam kwaye bendifuna ukuba ube lusindiso lwam eluthandweni.
Enkosi Ngcwele wam onamandla.
Umthandazo Wentsusa IiBhafu ezinamandla kunye neMysticBr, Ikopi Yalelweyo, Wohlwaywa nguMthetho.
Ngaba uwuthandile lo mthandazo we-moring waseSt. Cyprian?
Sineminye imithandazo emi-2 enamandla kakhulu, qhubeka nje ufunda eli nqaku.
Umthandazo oqinileyo kaMaria Padilha kunye neSão Cipriano
Bambalwa abantu abamaziyo uMaria Padilha.
Yazi ukuba unamandla kakhulu kwaye kunye noSaint Cyprian benza imimangaliso yokwenyani.
Yiyo loo nto umthandazo wakho ucelwa phantse ngumntu wonke.
Lo mthandazo ubhekiswa kwaba bangcwele babini ngaxeshanye, ke uyazi ukuba unamandla okukungenela omabini.
Ngowona mthandazo unamandla kweli nqaku, ke sebenzisa amandla akho ngokupheleleyo!
Owu, isithandwa sam uMaria Padilha kunye noSão Cipriano, wanga (igama lomntu othandekayo), ngalo mzuzu, nangawo wonke umzuzu wobomi bakhe, azive eluthiwe uthando lwethu...
O, ihobe lam eliyintanda, ngamana, (igama lentandane), likwazi ukucinga ngathi kunye ngamaxesha onke, linqwenela iphunga lam, incasa yam, isondo sam ...
Ngamana yena, (igama lomntu othandekayo), alale, avuke kwaye aphefumule ukucinga ngokusondelana kwethu, unokuziva epholile xa ekhumbula ukuba mna, (igama lakhe), ndikhona kuphela kuye, (igama lomntu othandekayo).
Loo nto imenza abe yimfama xa, ukuba kunokwenzeka, ezicingela nenye ibhinqa (enye indoda).
Intelekelelo yakho ayinakuze ikwazi ukwenza lo mboniso engqondweni yakho, naphakade. Ngamana, (igama lomntu othandekayo), ulahlekelwe uphondo kunye nawuphi na omnye umfazi (enye indoda), ngakumbi kunye neyakhe (lowo ayifunayo).
Ngamana yena, (igama lomntu othandekayo), xa ejonga abanye abafazi (amanye amadoda), ungalokothi uzive u-horny, udikwe nabo.
Ngamana angaziva ekhangayo kunye nomnqweno womzimba wam kuphela, iphunga lam, incasa yam, i-caresses yam, ubuso bam, ulusu lwam kunye nezwi lam liya kumkholisa, (igama lomntu othandekayo).
Ngamana yonke into kum, (igama lakho), ifezeke ukuzalisekisa yonke into evuselelayo, yothando kunye nayo yonke into ekuyo.
Kuphela mna, (igama lakhe), ndinayo kwaye ndiya kuhlala ndinamandla phezu kwakhe, (igama lomthandayo). Ngamana yena, (igama lomntu othandekayo), uhlala exhalabile, enqwenela, edidekile ukundibona, eve ilizwi lam, kwaye, xa eva, yena, (igama lomthandayo), azive intliziyo yakhe iphuma. umlomo wakhe, uyashukuma ukuba abe.
Ngalo lonke ixesha eliva ilizwi lam, ngamana, (igama lomntu othandekayo), azive umzimba wakhe uvutha yinkanuko kunye nobushushu.
Ngalo lonke ixesha yena, (igama lomntu othandekayo), endibona okanye eva ilizwi lam, yena, (igama lomthandayo), uya kuziva umzimba wakhe ungcangcazela ngovuyo, umnqweno wam, (igama lakho).
Wanga umzimba wakhe wonke ungaphambana ukundibona, (igama lakho). Ngamana yena, (igama lomntu othandekayo), engazi ukuba enze ntoni xa endibona.
Ngokholo ndithandaza lo mthandazo kaMaria Padilha kunye noSão Cipriano...
Yena, (igama lomntu othandekayo), uya ku-hypnotized nje ngam, (igama lakho), efuna ukundiphuza ngokungayeki.
Yanga angade aphelelwe lithemba ngalomzuzu afune ukuba nam. Ngamana (igama lomntu othandekayo) ndikhale kwaye ndiphelelwe lithemba, (igama lakho), ndiyakukhumbula.
Ukuba xa endibona, abe nophondo kwaye uya kuziva intliziyo yakhe isantya ngenxa yovakalelo lokuba nam, (igama lakho).
Ulangazelelo lunamandla, uya kuhlala nam ngokukhawuleza kwaye siya kuhlala ngoxolo nolonwabo.
Kwaye ngeli xesha, (igama lomntu othandekayo) uziva buhlungu ngenxa yokuba kude nam kwaye konke (igama lomthandayo) ubona ukuba ndigqibelele, ndithembekile kwaye ndinobulungisa kuye kwaye andivumeli nabani na ukuba athethe. ndibindekile .
Yena, (igama lomntu othandekayo), uya kuphambana kakhulu ngokulangazelela, umona, uthando, umnqweno kunye nam kuphela, (igama lakhe).
Ngalo lonke ixesha yena, (igama lomthandayo), ekunye nam, (igama lakhe), uya kundibona njengothixokazi (uthixo), yedwa (okuphela kwakhe), inkosi (inkosi) ubugcisa bothando, ngokwesondo, ukoyisa, ukuhenda, nayo yonke into ayithandayo...
Ihobe lam elihle ligqityiwe! Ngamana yena, (igama lomntu othandekayo), azive endikhweleta kakhulu ... kwaye abonise lo mona ukuze mna, (igama lakhe), ndibone ukuphelelwa lithemba kwakhe nje ngengcamango yokulahlekelwa kunye nokungabi nam kwakhona, (igama lakhe).
Nangona yena, (igama lomntu othandekayo), uyesaba kakhulu ukuphulukana nam kwaye unothando ngakumbi kum ..., yena, (igama lomntu othandekayo), uya kuziva de kube sekupheleni kweentsuku zakhe uthando, umona, impambano kunye nothando kum kuphela, (igama lakho).
Ngesondo sam, ngenxa ye-caresses yam, ukwanga kwam, ngenxa yevumba lam, ukuba ngelo xesha yena, (igama lomntu othandekayo), uziva uxinezeleko olukhulu esifubeni sakhe ngomnqweno wokundibona, ukuba umfanekiso wam ukususela namhlanje awufuni. phuma kwakhona iingcinga zakho ngalo lonke ixesha.
Xa ecinga ukundigqobhoza, makube ngumlilo umzimba wakhe, (igama lalowo umthandayo) angafana nesilwanyana esitshisayo nanini na endibona, ngenxa yam nje, (igama lakhe).
Yena, (igama lomntu othandekayo), uya kundinqula njengokungathi ndinguthixokazi (uthixo), umzimba wam uya kumgxotha ngeminqweno rhoqo.
Yena, (igama lomntu othandekayo), akayi kukwazi ukulala, uxolo, uxolo, ukulala ngesondo, kuncinci ukuhlala kufutshane nabanye abafazi (amanye amadoda), nayiphi na enye imini, ngaphandle kokubona umfanekiso wam, iphunga lam, Ilizwi lam, incasa yam, ungaphefumli kakuhle, uya kuziva uxinezelekile, uphelelwe lithemba, ude uhlale nam kwaye uvume kum ukuba awusenako ukuma ngaphandle kwam, (igama lakho), ukuba undithanda kakhulu kwaye ukuba uphambene ngokundithanda, (igama lakho) ).
I-Saint Cyprian, ihobe elihle, yenza (igama lomntu othandekayo) ufune ukuhlala nam ngonaphakade.
Makube njalo, kuya kuba njalo, i-pombagira yam ethandekayo, vuthela endlebeni yakhe, (igama lomntu othandekayo), inkanuko, inkanuko, umnqweno, uthando, ubuhlanya, ndikukhumbula kuphela ngenxa yam, (igama lakho), ngenxa yomzimba wam. , ngenxa yesini sam , ngenxa yenkampani yam, kude kube sekupheleni kwemihla yakho.
Ngamana angandidinga (igama lakhe) ngokungathi ngumoya aphefumlayo (igama lothandiweyo).
Ngoko kuyenziwa. Yena, (igama lomntu othandekayo), uya kumisa yonke into kwaye abone ukuba ubomi bakho bumisiwe ngaphandle kwam, kuba wena, (igama lomthandayo), awuyi kufuna ukwazi nayiphi na enye ibhinqa (nayiphi na enye indoda) ngaphandle kwam, (igama lakho elithandekayo). igama lakho), uya kundifuna kuphela, (igama lakho).
Yena, (igama lesithandwa), uya kundithanda njengophambana… aphelise obu budlelwane buxhomekeke kwabanye kunye nenkosikazi yakhe (abanye kunye nendoda yakhe).
Owu ndlovukazi yam ihobe i-spinner ngokungxamisekileyo, kwaye umenze, (igama lomntu othandekayo), uvela kumkhondo, unqwenela mna, (igama lakhe), uphambene ngothando, ngokulangazelela, ukuvuma ukuba uyandifuna, ukuba mna, ( igama lakhe) igama), ndiluvuyo lobomi bakho, isizathu sophondo lwakho kunye neminqweno yokwenyani.
Ngamana yena, (igama lomntu othandekayo), akanalo uxolo, akukho uxolo ebomini bakhe ade ahlale nam, (igama lakhe).
Mna, (igama lakho), ndibiza amandla akho, kumkanikazi wehobe uGira, ukuba ukhawuleze ukuzisa (igama lakho), ululame njengemvana kwaye uphambene ngothando lwam.
Mzise (igama lomntu othandekayo) njengendoda yam (umfazi wam). Ukuze ndikuzise kum, Kumkanikazi uPomba Gira, ndiza kuwupapasha lo mthandazo….
UPomba Gira kunye noSão Cipriano, bamenze (igama lomntu othandekayo) abe buhlungu, aphambene, ahlupheke kwaye acinge ngam iiyure ezingama-24, akakwazi ukulibala umzuzu wosuku lwakhe, ade andikhangele, kwaye ukususela ngoku ukuya phambili, , (igama lomntu othandekayo), awuyi kuba noxolo noxolo ngeli xesha elisikelelekileyo lokuba kude nam (igama lakho).
Ngaba ukonwabele ukuthandaza lo mthandazo unamandla ka-Maria Padilha kunye no-São Cipriano, owenzela amadoda nabafazi?
Ndiyathemba ukuba kunjalo, kodwa sisenomthandazo omnye oya kuwuthanda!
Umthandazo ka-Zé Pilintra wokukhuthaza ngamandla
Masiliqukumbele inqaku lethu ngomthandazo oya kuZé Pilintra.
Uyaziwa kwihlabathi lase-Umbanda ngezizathu ezilungileyo.
Inceda ngokwenene abo basweleyo kwaye isoloko ikho kwabo bantu baswele ngokwenene.
Lo ngumthandazo obophelelayo onothando kwabo bantu bahlala kwilizwe laseMbanda okanye Candomblé.
Zé Pilintra, wena okhathalela abo bafuna ukukhathalelwa, wena uthuthuzela iintliziyo ezihlala zityumkile, ndicela uncedo lwakho olunamandla eluthandweni.
Ndiyakholelwa kuMbanda, ndiyakholelwa kuwe, kwaye ndiyakholelwa kuwo onke amandla akho.
Yiyo loo nto ndikunika amandla omthandazo wam ukuba ubophe (igama lomntu) kum ngokulula, ngokukhawuleza nangokuqinisekileyo.
Bopha (igama lakhe) kum, bopha umzimba wakho wonke, zonke iingcamango zakho kunye namandla akho onke.
Guqula umzimba wakhe ube ngowam, iingcinga zabo zibe zezam kwaye udibanise uthando lwethu kunye nentsimbi yakho yentsimbi.
Ndidala kuwe Zé Pilintra kuba ndiyazi ukuba ungasibopha.
Kuba ndiyazi ukuba ungasinceda.
Kaloku ndiyayazi awusikhabe isicelo somntu ofuna uncedo lwakho.
umthandazo wokuqala MysticBr, Ukukopa Akuvumelekanga, Ukohlwaywa nguMthetho.
Ucinga ntoni ngomthandazo kaZé Pilintra wokubethwa ngamandla nangokukhawuleza?
Ngumthandazo omhle kakhulu ukuba naliphi na ikholwa laseMbanda lingathandaza, kholwa nje kwaye ukholwe.
Ngaba ndingathandaza imithandazo emi-3 ebophelelayo kunye?
Akukho nto ikuthintela ukuba uthandaze imithandazo emi-3 kunye, kodwa yazi ukuba asiyicebisi.
Sincoma, endaweni yoko, ukuba uzame ukuthandaza umthandazo om-1 ngexesha kwaye uhlalutye amandla akho.
Thandazani ngamnye iintsuku ezisi-7 kwaye ukuba ekupheleni kwelo xesha awuzifumani iziphumo ngoko unako kwaye kufuneka udlulele kwenye.
Ukuthandaza bonke bo-3 kunye kuninzi kakhulu kuba bonke bakhonza injongo enye.
Umthandazo weSaint Cyprian ukubopha umntu
Umthandazo wokugxotha imimoya engendawo
Emva kweli nqaku lide ndiyathemba ukuba imithandazo ethile ebophelelayo ikukholisile.
Hlala ukhumbula ukuba amandla emithandazo angaphakathi kuwe.
Ukholo lwakho luya kuba yeyona nto ibalulekileyo ukuhambisa onke amandla afunekayo ukwenza izinto ezilungileyo zenzeke!
1 Ngaba umthandazo obophelelayo onothando uyasebenza?
2 Umthandazo weSaint Cyprian wokufumana i-moring eqinisekileyo
3 Umthandazo oqinileyo kaMaria Padilha kunye neSão Cipriano
4 Umthandazo ka-Zé Pilintra wokukhuthaza ngamandla
5 Ngaba ndingathandaza imithandazo emi-3 ebophelelayo kunye?
Ngomhla wama-22 kuMatshi 2019, 2: 25 am
yiba lusindiso lwam ngothando.